Nanambara i Polonina fa misy ny vonjy taitra any amin'ny sisintanin'i Belarus noho ny firongatry ny mpifindra monina tsy ara-dalàna
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Poloney » Nanambara i Polonina fa misy ny vonjy taitra any amin'ny sisintanin'i Belarus noho ny firongatry ny mpifindra monina tsy ara-dalàna
Vaovao Mafana Belarus • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Poloney • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny mpanao didy jadona belarosiana Alexander Lukashenko dia nanambara fa tsy hanandrana ny hanakana ireo mpifindra monina tsy hiditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana intsony ny fitondram-panjakana aorinan'ireo mpikambana ao aminy hanasazy an'i Belarus noho ny fifidianana filoham-pirenena hosoka tamin'ny 2020, nataon'i Lukashenko.
Miakatra be ny mpifindra monina tsy ara-dalàna any Polonina.
Ny fanjakana vonjy maika dia nambara tamin'ny sisintany Poloney-Belarus.
Belarus manampy sy manohana ny fifindra-monina tsy ara-dalàna any Polonina sy any amin'ny firenena eropeana hafa.
Ny filoham-pirenen'i Polonina dia nanambara fa misy fepetra maika any amin'ny faritra roa manamorona an'i Belarus noho ny fiakaran'ny vidin'ny fiampitana sisintany mpifindra monina tsy ara-dalàna.
Sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena kaominista no nampiharina ny vonjy taitra teo amin'ny sisin-taniny - Polonina tsy mbola nampiditra fepetra toy izany, ary nanalavitra ny fametrahana fepetra iray na dia nandritra ny fotoana sarotra indrindra tamin'ny valanaretina COVID-19 aza, na teo aza ny antso nataon'ny governemanta sasany hanao izany.
Ny fanjakana maika dia hijanona mandritra ny 30 andro farafaharatsiny.
"Nanapa-kevitra ny filoha fa… hampiditra fanjakana maika any amin'ireo faritra notendren'ny filankevitry ny minisitra," hoy ny mpitondra tenin'i Duda, Blazej Spychalski, tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny alakamisy teo.
"Sarotra sy mampidi-doza ny toe-javatra eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Belarus," hoy i Spychalski. "Androany, isika Polonina, tompon'andraikitra amin'ny sisintanintsika manokana, fa koa amin'ny sisintanin'ny Vondrona Eropeana, dia tsy maintsy mandray fepetra hiantohana ny filaminan'ny Polonina sy ny Vondron Eropeana."
Ny talata lasa teo dia nangataka tamin'ny fomba ofisialy an'i Duda ny governemanta mba hametraka ny fanjakana maika any amin'ny faritra sasany any amin'ny faritra atsinanan'i Podlaskie any Polonina sy ny faritra Lubelskie izay mifanila amin'i Belarus. Ny baiko dia mihatra amin'ny tanàna 183 mitodika mifanila amin'ny sisin-tany ary hamorona faritra manana halavirana telo kilometatra manamorona ny sisintany miaraka amin'i Belarus.
Ny fankatoavana dia mbola tsy neken'ny trano ambany amin'ny parlemanta poloney - ny Sejm. Voalahatra hiantso ny raharaha ny zoma na ny alatsinainy io, raha ny fampitam-baovao avy amin'ny haino aman-jery poloney.
Ny hetsika dia tonga tao anatin'ny fitomboan'ny fifindra-monina tsy ara-dalàna izay natrehan'i Polonina sy ny fanjakana sasany any Baltika tato anatin'ny volana vitsivitsy. Mpifindra monina tsy ara-dalàna an'arivony maro noheverina fa nandeha avy any Moyen Orient no niampita na nanandrana niampita nankany Latvia, Lithuania ary Polonina avy any Belarus mpifanila trano tamin'io fe-potoana io.
Nilaza ireo mpiambina ny sisintany Poloney tamin'ny Alarobia fa ny volana Aogositra fotsiny dia nahita andrana 3,500 nataon'ny mpifindra monina hiditra an'i Polonina avy any Belarus. Ny mpiambina dia nanakana ny fanandramana 2,500 toy izany.
Ny fandrosoana dia efa nanosika an'i Warsaw handefa miaramila hanangana sakana tariby hareza 2.5 metatra natao hamelarana ny ankamaroan'ny sisin-tany 150 kilometatra miaraka amin'i Belarus.
The EU niampanga an'i Belarosiana ho nanao “fanafihana mivantana” ny bloc ary nanandrana "nanao fitaovana ny olombelona ho amin'ny tanjona politika" tamin'ny fanosehana ireo mpifindra monina nankany amin'ny sisintanin'ireo mpikambana mpikambana. Niampanga an'i Minsk ihany koa i Vilnius ho nanidina mpifindra monina avy any ivelany ary nanidy azy ireo hatrany amin'ny sisintany ho toy ny endrika ady.